देश बन्धकी राखेर के गर्न खोजेको हो एमालेले ? - Everest Dainik - News from Nepal
देश बन्धकी राखेर के गर्न खोजेको हो एमालेले ?
अडकाउने र गोरु चुट्ने रणनीतिमा देखिन्छ एमाले
काठमाडौं, वैशाख ११ । नेकपा एमाले अर्थात् व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी । संख्यात्मक हिसाबले नेपाली कांग्रेसपछिको दोश्रो ठूलो दल ।
बिडम्बनाको कुरा, दोश्रो ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षीले खेल्नुपर्ने रचनात्मक भूमिकाको साटो यतिखेर भने एमालेले ध्वंसात्मक र गैर राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।
देशका सामु पक्ष र प्रतिपक्षको अर्थ हुँदैन । देश संकटमा परेको बेला, देशले निकास खोजेको बेला पक्ष र प्रतिपक्षले एउटै मियोमा अघि बढ्नुपर्छ । यदि यसो नभएको भए नेपालमा संविधान बन्ने थिएन । त्यतिखेर प्रतिपक्षी दल माओवादीले नै मुख्यरुपमा पहल लिएर १६ बुँदे सहमति भएको थियो । माओवादी संविधानमा पूर्ण सहमत थिएन । तर आफ्ना फरक मत संविधानसभामा दर्ता गराएर माओवादीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
तर एमाले ? अहिले उसको भूमिका हेर्दा उसले हलो अड्क्याएर गोरु चुट्ने रणनीति लिएको छ । एकातिर चुनावको रटान लगाउने अर्कोतर्फ चुनावको वातावरण बन्न नदिने । संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने एकोहोरो रटानले देशको आधा जनसंख्या चुनावबाट वञ्चित हुने यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै पनि एमालेले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप संकटमा लगिरहेको छ ।
जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको नाताले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी एमालेको पनि हो । मधेसी मोर्चालाई या त पुरै निषेध गरेर जानुपर्यो होइन भने उससँग भएको जनमतको सम्मान गर्न सहमतिको प्रयास गर्नुपर्यो । एमालेले यो कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छैन । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने एकसूत्रीय दाऊ एमालेले खेलिरहेको छ ।
अहिले पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दल सबै सहमत छन् । यी दलहरुलाई पनि नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता, नेपालको समृद्धिको उत्तिकै चिन्ता होला जति एमालेले दावी गर्छ । देशको माया उत्तिकै होला जति एमालेले आफूलाई बताउँछ । यो अवस्थामा अहिलेको संशोधन एमालेका लागि मात्रै बेठिक कसरी हुन्छ ? कमल थापादेखि देउबा र प्रचण्डसम्मका लागि राष्ट्रघाती नहुने, मधेसी मोर्चादेखि अन्य थारु, दलितका लागि प्रतिगामी नहुने संविधान केपी ओलीका लागि कसरी घातक हुन्छ ?
स्पष्ट छ, एमालेले हलो अड्काउन खोजेको छ । उसले निर्वाचन चाहेको छैन । उसले देशले निकास पाओस् भन्ने चाहेको छैन । तथाकथित संख्याको दम्भमा उसले देशलाई यही भूमरीमा रुमल्याउन खोजेको छ । तर इतिहासका पानाहरुमा यसको ठूलो मूल्य एमालेले चुकाउनु पर्ने निश्चित छ ।
नेपाल कसको हो ? केपी ओलीको ? प्रचण्डको ? देउबाको ? कमल थापाको ? मधेसी नेताहरुको ? के यो देश सबैको होइन ? के यो देशको माया सबैलाई छैन ? कि केपी ओली र एमाले बाहेक सबै देश बेच्न लागेका छन् ? त्यसो हो भने एमालेले त्यही भन्नुपर्यो र कानुनीरुपमा नै अरुलाई निषेध गरेर अघि बढ्नु पर्यो । होइन भने अहिलेको यो भूमिकाले एमालेलाई कहाँ पुर्याउँछ ? सरकारको बिरोधको नाममा देशलाई नै संकटमा पार्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई खतरामा पार्ने र इतिहासलाई उल्टो दिशामा घुमाउने एमालेको यो भूमिका विशुद्ध निन्दनीय छ । यसमा कुनै पनि राजनीतिक चरित्र देखिँदैन ।
संशोधन प्रस्ताव घातक नै छ भने एमालेले सदनको सामना किन गर्दैन ? सदनमा दर्ता भएपछि मतदान हुने बेला विपक्षमा मतदान गर्ने साहस किन गर्दैन ? प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने यो कुन चाहिँ राजनीतिक संस्कार हो ? यी प्रश्नहरुको जवाफ एमालेले दिनुपर्छ ।
ट्याग्स: constitution reform, cpn uml, KP oli